U-Jumpy ungoyiki kwaye unocelomngeni kwiqonga elenziwa ngu-Ketchapp | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Imidlalo yeKetchapp icela umngeni kuthi kwakhona ngeJumpy, iqonga elinenkalipho
Imidlalo yeKetchapp iyaqhubeka nokusungula imidlalo yevidiyo emitsha phantse veki nganye, eyenzekayo ukuba ayizizo zonke ezithanda ukutsala umdla wokuzigqithisa kule migca. Iqhele uku ezinye ezikumgangatho ophezulu, umzuzu wokuqinisekisa ukuba enye iwele ngendlela engenamsebenzi, ndidlula kuyo ukulinda enye ukuba ipapashwe kwintsuku nje ezimbalwa. Kwinto yokugqibela esinayo kwimidlalo yeKetchapp ekumgangatho ophezulu Ixesha lesiphelo, umdlalo oqhelekileyo wokulala owenza umdlalo okhethekileyo kunye nokufunxa. Kule midlalo siyithandayo eKetchapp kwaye ihlala iwela amaxesha ngamaxesha, phantse ibifana nale sinayo.
Ngoku sinoJumpy, ozikhwebulayo kwiBreaker Liner ngendlela eyakhiwe ngayo ube liqonga lokwenyani, nangona kukho umahluko okona kulungileyo kwimidlalo eqhelekileyo. Isizukulwana esingahleliyo seqonga ngalinye ngalo lonke ixesha sidlala yenye yezona mpawu zintle kwaye sinika indawo eyonwabisayo yokuba kufuneka sijolise kakuhle ukuze sikwazi ukoyisa yonke imiqobo esiza kudibana nayo kuhambo lwethu de ekugqibeleni siphumelele. . Umdlalo oqhelekileyo onobugcisa beepikseli obuchukumisayo njengamanye amaqonga.
1 Tsiba utsibe kwaye utsibe
2 Vula inani elifanelekileyo labalinganiswa
Tsiba utsibe kwaye utsibe
UKetchapp uphinde wacela umngeni kuthi ngokungathandabuzekiyo kwezi zisibeka phambi kwethu ukuze sibuyele sidlale umdlalo emva komnye. Ngaphandle kwezona mpawu zibalulekileyo, kubalulekile ukuba masiyazi indlela yokulawula umlinganiswa ophambili kolu lonwabo lincinci, kuba, ngokutsiba okuphindwe kabini, ukutsiba kwiintshaba okanye abo baya entloko kumaqonga, siya kufumana uluhlu olukhulu lokoyisa zonke ezo ngxaki zizokuza.
Iziselo ezi-Jumpy ngokucacileyo ezivela kwifayile ye- Umthombo kaMario wenkuthazo Ngezo ntloko zentloko kunye nokutsiba ngaphezulu kweentshaba ukuze sibhukuqeke ukusuka komnye ukuya komnye size ke sitsibe eqongeni elilandelayo. Yiyo le nto esenza sonwabe kwaye nokuba singafa kanye emva komnye, singabuyela emva siye kudlala omnye umdlalo ukuze sifumanise ukuba yeyiphi na into engekhoyo u-Jumpy asilungiselele yona yokuphelisa ubomi be-protagonist yethu enentloko enkulu.
Vula inani elifanelekileyo labalinganiswa
Umdlalo weKetchapp awunakuphosa ukhetho lwe fumana iimali ezingaphezulu ukuvula abalinganiswa abaphambili. Oku kuthetha ukuba ikwanentengiso eninzi kunye neevidiyo zokufumana iingqekembe ukuze zifumane wonke umxholo uJumpy anawo. Phantse luxanduva lokubonelela ngolu hlobo lomxholo ukukhuthaza umdlali ukuba aqhubeke nokudlala, kuba yinto eyonwabisa kakhulu.
Kwaye ayisiyiyo ngokuba u-Jumpy uyayidinga ngokwenene, kuba umdlalo wayo weqonga umnandi kwaye usenza ukuba sizicele umngeni ekusebenziseni ixesha elide, ezahlukeneyo ngaphezulu kweentloko iintshaba okanye ufumane indawo ngqo ukufikelela kwelinye iqonga ukuze ungangeni kokungabikhoyo.
Ngumdlalo ekufanele ukuba uwenze kakuhle iintshukumo ezahlukeneyo kunye nokuhamba kwe-protagonist kwaye xa siyifumana, siya kufumana ukonwaba ngakumbi ngeJumpy, kuba injalo loo nto. Kwihlabathi leSuper Mario ukuba besingakwazi ukuqonda zonke iinkalo zikaMario, bekungenakwenzeka ukuba sifike kwi-adventure yokugqiba umdlalo wonke.
Utsiba kunjalo simahla ukusuka kwiVenkile yokuDlala kuGoogle kwaye iyafumaneka njengeqonga lokuzonwabisa nelomeleleyo kwezi ntsuku zibandayo zasebusika.
Kuzo zonke iinkalo zayo isebenza kakuhle kwaye nangona ingabonakali nakwezinye, inqanaba lakhe ngokubanzi lilungile. Sithetha ngokungakhathali ngaphandle kweenjongo eziphambili, kodwa into ekuyo isebenza kakuhle kakhulu, kwaye, ekupheleni kosuku, yintoni efunwayo kumdlalo wolu hlobo. Eyona nto intle inokuba ziziphumo zayo zesandi eziza kukukhumbuza ngeNintendo.
Ukuveliswa okungahleliwe kwamanqanaba
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Imidlalo yeKetchapp icela umngeni kuthi kwakhona ngeJumpy, iqonga elinenkalipho
Yilahle loo backhand inamandla kwaye ukhokele umdlali wakho ukuba atye ukungcola kwiBan Bang Tennis
I-Hack inkqubo kwi-Hacker 2.0 kwi-Deux Ex GO